ऋषि धमलाको प्रश्न भीम रावललाई : तपाईँ एमाले छोडेर माधव नेपालको पार्टीमा जान लागेको हो ?
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले दश बुँदे सहमति अझै कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखेका छन् । उनले आफूहरु धेरै ठूलो जोखिम मोलेर १० बुँदे सहमति गरेको खुलासा गरे ।
बुधबार, अशोज २७, २०७८ ७:३०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले दश बुँदे सहमति अझै कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखेका छन् । उनले आफूहरु धेरै ठूलो जोखिम मोलेर १० बुँदे सहमति गरेको खुलासा गरे । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले दश बुँदे पार्टीका बैठकबाट अनुमोदन भैसकेको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भने, हाम्रो उद्देश्य भनेको देश जोगाउने हो । म त नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचित उपाध्यक्ष हुँ । हामीसँग दश जनामात्रै होईन, हजारौं पँक्ति छ । उनले अहिले एमालेका कतिपय नेताले दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने, बरु छोडेर गएपनि जाउन् भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।